အရက်အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုကူညီဖို့သို့မဟုတ်ဆီးတားပါသလား? - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဆောင်းပါးများ > အရက်အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုကူညီဖို့သို့မဟုတ်ဆီးတားပါသလား?
Megan မတ်လ 11, 2017 ဆောင်းပါးများa Comment ချန်ထား မအရက်သေစာအကူအညီနဲ့ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုဆီးတား?
ဒါဟာသင်မေးသူကိုအပျေါ၌မူတည်ပါသည်။ တချို့ကအရက်ဟာအရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များအတွက်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံ dulls ကြောင်းပြောကြသည်။ သို့သော်အခြားသူများကအရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုတက်တတ်၏သောအတားအဆီးကိုလျော့နည်းစေတယ်လေကြောင်းပြောကြသည်။ သူတို့အားအတားအဆီးများချကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ယုတ္တိစိတ်ထဲတွင်ပယ်ချအံ့သောငှါသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိဖို့ပိုပြီးပွင့်လင်းကြသည်။
ဒါဟာတချို့နာမည်ကြီးအကြားအမြင်နှင့်ချန်နယ်များကြိုတင်ဘာဝနာနှင့်လက်ခံထားတဲ့အစွဲတူသောပြည်နယ်များသို့သွားရာလမ်းကိုမသောက်အရက်ကိုဖော်ပြရန်သတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ နာမည်ကျော်သည့်အဘယ်သူသည်ဥပမာအားဖြင့်, ဂျိန်း Roberts သည်, ရှေပစ္စည်းသူမသည်မကြာခဏဝင် ဖြစ်. မသွားမီစပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အရက်ဟာသတိစိတ်ထဲများ၏ချုပ်ကိုင်လျှော့ချစေခြင်းငှါနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိစိတ်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးသုံးပြီးအချို့အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါသညျ။ တစ်ခါတစ်ရံသတိစိတ်ကိုကျနော်တို့ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ကိုဖွင့်အချက်ပြအနက်ကိုဘော်ပြမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတိစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးသတိပေးချက်လက်ခံရရှိတစ်ချိန်ကအရေးယူရန်အသုံးပြုဘယ်အရာကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအရက်မူးနေနှင့်သင်အန္တရာယ်တစ်ခုသတိပေးချက်အရဆိုပါကဥပမာအားဖြင့်, ထိုအရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးသောအရာကိုများအတွက်သတိပေးချက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပေါ်မှာသရုပ်ဆောင်ထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဥပမာထဲမှာ, အရက်ကို (သတိစိတ်ကိုဖွင့်ချုပ်ကိုင်ထား၏လျှော့ချ) ၏အကျိုးအတွက်အရေးယူပေးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် offset ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါအခြေအနေများသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သောအရာကိုအာရုံစိုက်။ သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အပြင်းထန်ဆုံးအခါသတိထားမိ, သင်အမှားလုပ်ကျရောက်နေတဲ့နေတဲ့အခါမှာသတိထားမိမှာ။ ဒါကလမ်း, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အထူးအခွအေနေတုံ့ပြန်နှင့်သင့်မွေးရာပါအဘိဥာဏ်အားသာချက်အရှိဆုံးစေနိုင်သည်။